Aadan Cadde: Muxuu guriga Aadan Cadde u noqday lama taabtaan? - BBC News Somali
Aadan Cadde: Muxuu guriga Aadan Cadde u noqday lama taabtaan?
Waa la cusbooneysiiyay 1 Luulyo 2021
Dad badan ayaa is weydiinaya su'aasha aan hordhaca uga dhignay mowduuceenna ee ah sababta guriga madaxweynihii ugu horreeyey Soomaliya uu u noqday meel ay xushmeeyaan oo aysan ku xadgudbin dhinacyadii dagaallada sokeeye ee dalka ku lugta lahaa, dagaallamayaashii qabaa'illada, qabqablayaashii dagaalka, Al shabaab, kooxaha burcadda qowlaysatada ah, iyo xataa dawladdii laga baqi jiray ee kacaanka.
Su'aasha waxaa keenay markii ciidan si gaar ah u tababaran oo Soomaali ah ay habeennimo gudaha u galeen beerta Aadan Cadde, dabadeedna, sida uu BBC u sheegay Dr Siciid Aadan Cadde oo uu dhalay madaxweynihii hore, ay gurigii uu ku noolaa xoog ku jabiyeen, ayagoo ka qaatay alaab dhex taallay, dadna ka kaxaystay sanaddii 2018-kii.
Dawladda Soomaaliya oo raalligelin ka bixisay weerar lagu qaaday guriga Aadan Cadde
Weerar lagu qaaday xarunta Otto Otto ee Muqdisho
Qayb ka mid ah guriga
Qayb kale oo ka mid ah guriga
Inkastoo uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya si degdeg ah raalli gelin u siiyey qoyska madaxweynihii ugu horreeyey Soomaaliya, haddana dad badan waxay dareensan yihiin in ay arrintaas aysan ahayn gef loo gaystay reer Aadan Cadde oo kaliya ee ay tahay gef laga galay Soomaalida oo dhan.
Sheekadan waxaa markii ugu horreysay la daaabacay 2018-kii